Onye Minista njem nlegharị anya kacha mma sitere na Indonesia | Ndị mmadụ
Location: Mbido » Ịdee » ndị mmadụ » Onye Minista Minista na-ahụ Maka Ọha na Ọha bụ nke si Indonesia
Onye Minista Minista na-ahụ Maka Ọha na Ọha bụ nke si Indonesia
Agwaetiti Derawan Indonesia Indonesia ftsq
Onye ukwu ya Sandiago Saiahudin Uno, Mịnịsta nke njem na Creative Economy maka Republic of Indonesia sonyeere World Tourism Network Group na Fraịde iji kwuo maka echiche ya banyere njem nlegharị anya maka Indonesia, echiche na atụmatụ. Fraide bụ ụbọchị ncheta njem mkparịta ụka nke WTN malitere na Machị 5, 2020
N'ihe dị nso na nde mmadụ asatọ na Instagram, Onye ukwu Sandiago Saiahudin Uno, Mịnịsta nke njem na Creative Economy maka Republic of Indonesia, ga-abụrịrị onye ọchịchị gọọmentị na-elekọta mmadụ.
"Achọrọ m ịga ọtụtụ webinars ga-ekwe omume," Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Indonesian gwara ndị otu Network Tourism Network.
Indonesia na-ele ndị ọrụ nọ na njem na njem anya dị ka nnoo na-enye ha ihe kacha mkpa na ịnweta ọgwụ mgbochi COVID-19.
Onye ukwu Sandiago Saiahudin Uno, Mịnịsta nke njem na okike okike maka Republic of Indonesia, sonyeere na Network Njem Nleta Ụwa Otu dị na Fraịdee site n'ụgbọ ala ya na-anyafe ebe mara mma Manado.
Manado bụ isi obodo mpaghara Indonesia nke North Sulawesi. Ọ bụ obodo nke abụọ kacha buo ibu na Sulawesi mgbe Makassar gachara. Dị ka obodo kachasị ukwuu dị na mgbago ugwu Sulawesi, Manado bụ ebe dị mkpa njem nleta maka ndị ọbịa. Ecotourism aghọwo ihe kachasị mma na Manado. Igha mmiri mmiri na ịmị mmiri na Bunaken Island bụkwa ndị ama ama na-ewu ewu. Ebe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Ọdọ Mmiri Tondano, Ugwu Lokon, Ugwu Klabat, na Ugwu Mahawu.
N'ịchọpụta ọkụ na-acha uhie uhie ma na-anụ ụda ụda nke ndị uwe ojii maka esote Minista na-eduga, Uno kwuru banyere echiche ya banyere njem nlegharị anya nke Indonesia, echiche na atụmatụ. Fraịde bụ otu afọ ncheta nke Iwughachi njem mkparịta ụka nke WTN malitere na Machị 5, 2020.
Ozi ya nye ndị otu Network Tourism Network bụ: “Ana m agbalị mgbe niile ịga ọtụtụ webinars dị ka o kwere mee. Enwere m obi ụtọ nde 7.7 na-eso ụzọ na Instagram, YouTube, na mgbasa ozi ndị ọzọ. Ana m atụkwasị obi na ndị otu World Tourism Network ga-enyere ibe ha aka n'oge ndị a siri ike. ”
Onye ozi ahụ gara n'ihu ịkọwa na ndụ obibi nke ndị Indonesia dị nde 34 dabere na njem, njem, na ụlọ ọrụ okike.
Ka ọ dị ugbu a, ọkara nke abụọ nke baajị 34 nde ọgwụ mgbochi dị na Indonesia dị njikere ịbanye na ogwe aka nke otu ihe kachasị mkpa gụnyere ụmụ amaala karịrị afọ 60, ndị uwe ojii, ndị ọrụ obodo, yana ụmụ amaala na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị njem.
Obodo a choro ichikota mmadu 181.5, ndi mbu ka a gbaa ogwu na anata ogwu CoronaVac site na Sinovac Biotech nke China, nke Indonesia nyere ikike iji ihe mberede. Usoro a ga-ewe ọnwa iri na abụọ.
Dị ka Onye Minista ahụ si kwuo, ihe ọmụmụ ndị kachasị ọhụrụ na-ekwu na ọ ga-ewe ụbọchị 28 mgbe anata ọgwụ ahụ iji chebe ya na COVID-19.
'Slọ ọrụ njem nleta nke Indonesia dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ na-adabere ugbu a na njem nlegharị anya ụlọ. Indonesia na mpaghara mpaghara Asia na-akparịta ụka iji mepee ụzọ njem njem njem COVID-19.
Onye ozi ahụ kwetara na onye bụbu Minista nke njem na Seychelles, Alain St.Ange, na mkpa ọ dị ịgwa ụwa ihe njem njem njem ga-enye. St.Ange gwara onye ozi ahụ: "Iji jelii na-egwu mmiri na Indonesia nke na-adịghị agba agba na ịhụ dolphin pink bụ nnukwu ahụmịhe."
Nzukọ ncheta nke World Tourism Network gụnyere ndị ozi nke njem si Asia na Africa; ndị isi na-ahụ maka ndị njem njegharị n'Africa, Malaysia, Seychelles, na Jọdan; na ndi otu sitere na ndi otu ndi njem na ndi mmuta nke World Tourism Network. Ugbu a, WTN nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị otu njem njem njem 1,500 na mba 127.
Minister Uno na-ele anya nzuko a ka o wee soro ndi WTN na ndi otu ya kerita ahuhu ha.
St.Ange kwuru na ọ na-ekele Mịnịsta maka isonyere na mkparịta ụka ahụ yana maka mmeghe ya iji soro netwọkụ mekọrịta. Onye Minista Indonesian kwuru na ọ bụ onye ọchụnta ego site na ọzụzụ.
Ozi ndi ozo banyere World Tourism Network: www.wtn.travel
Asia Aviation Bunaken Covid-19 Economy Ecotourism Ekele Indonesia Island Sulawesi Tourism WTN
Agwaetiti Sardinia: Naanị mpaghara ọcha na Italytali
STIC Travel Group kpọrọ onye isi ọhụrụ
Ngwaahịa Metal Polish Ahịa Outlook mkpuchi ọhụrụ...
Nnyocha ọhụrụ na-egosi na anyị na-arịa ọrịa, ike gwụrụ anyị, karịa ...
Ịkwalite ọgwụgwọ maka Autism
Mbụ Airbus A380 kwadoro site na 100% Sustainable Aviation...
Ngwọta ọhụrụ nke roboti na-eduzi maka ọrịa kansa prostate...
Azul nke Brazil: Azụmahịa dị mma na Q1 2022
New Condor anaghị akwụsị Frankfurt ruo Phoenix na Portland...
Aeroflot nke Rọshịa akwụsịla mba ụwa niile…
Ahịa Silage Inoculants: Ụzọ ọhụrụ ọhụrụ n'ọdịnihu ...
GVB na-akwado maka mmụba a tụrụ anya na njem site na ...
Rwanda na-akwado ịnabata ndị ọbịa mba ofesi na-esote...
Ihe ndabara: Sri Lanka kwụsịrị ịkwụ ụgwọ niile na mba ofesi...
Ule ọhụrụ na-ekpughe afọ ndụ ndụ gị
TGI Fridays ọhụrụ kacha munchie ndozi
Ọgwụ ọhụrụ maka schizophrenia, ịda mbà n'obi na ...
Usoro ọgwụgwọ ọhụrụ iji gbanwee ọgwụgwọ nke ...
Ọmụmụ ụlọ ọgwụ ọhụrụ na ọgwụgwọ dijitalụ maka nchekasị